တရုတ် 90mm ဖြတ်တောက်ထားသည့်အနက်ရောင်နက်ရှိုင်းသောသုံးရောင်စုံ SMD Downlight ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထောက်ပံ့သူ | Simons
90mm Cut-Out နက်ရှိုင်းသောအတွင်းဘက်သုံးအရောင်ရှိသော SMD Downlight
input ဗို့အား: 220-240V
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SAA, C-Tick, CE, RoHS
လျှောက်လွှာ - ရုံး၊ ဆိုင်ခန်း၊ မိသားစုစသဖြင့်
မူလအစ: Xiamen, တရုတ်
နက်ရှိုင်းသောနက်ဝပ်အောက်ခံသုံးအရောင် 90mm Cut-SMD Downlight
1. သုံးပွင့်ဆိုင်လုပ်ရန်မလိုအပ်သော၊ ပူနွေးသောအဖြူ (3000K)၊ အဖြူရောင် (4000K) နှင့်သဘာဝအဖြူ (5000K) အကြားပြောင်းနိုင်သည်။
၂။ အဆင့်မြင့်အပူစီးကူးပလတ်စတစ်ရေဒီယိုလှိုင်းများ၊ ကောင်းမွန်သောအပူလွန်ကဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်သောသက်တမ်း။
၃။ တည်ဆောက်ထားသည့်ဒရိုင်ဘာ၊ မှိန်မှိန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပြုလုပ်ပေးသူများအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။
၄။ SAA၊ C-tick, CE, RoHs အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပြီးဖြစ်သည်။
၅။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် IC-4 ကိုလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်။ အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၆။ မြင့်မားသော LED SMD Aray၊ lumen ထိရောက်မှုသည် ၁၀၀ lm / w အထိရှိသည်
7. နက်ရှိုင်းသော fascia ပါ ၀ င်သောဒီဇိုင်းကအလင်းအားပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည်ဟုကတိပေးသည်။
၈) Dimmer အမျိုးအစား - နောက်ဖက်၊ 0-10V၊ DALI / DSI၊ Tuya Smart
၉။ high-transmittance PC diffuser ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မြင့်မားသော lumen output ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းတွင်ဖြန့်ကျက်သူသုံးခုရှိပြီး၎င်းကိုဖြုတ်ချမည်မဟုတ်ဟုကတိပေးသည်။
၁၀။ PCB ဘုတ်ပေါ်မှချစ်ပ်များ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖြန့်ဖြူးမှု၊ နိမ့်ဆုံးမှမှိန်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမမှောင်မိုက်အာကာသ။
၁၁။ သုံးပွင့်ဆိုင်မီးပွိုင့်အတွက် switch သည်အလင်း၏ဘေးတွင်ရှိပြီး၊ ဝယ်သူသည် 3000K / 4000K / 5000K သို့ပြောင်း။ ကုန်ပစ္စည်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ switcher ရဲ့အရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ AC cable တွင်းရှိဆီလီကွန်ရာဘာကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ထည့်သွင်းခြင်းများမှအလင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ပါဝါ 5W, 8W, 10W ရပ်သွားသည် 90mm
အချင်း 115mm အမြင့် 72mm
အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် IP44 သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ပလတ်စတစ်အဖုံးလူမီနီယမ်
အလင်းရင်းမြစ် အယ်လ်အီးဒီ LED Chip SMD 2835
CCT 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tri- အရောင် Beam Angle 100 °
ရှေ့သို့ 70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့်အနက်ရောင်နက်ရှိုင်းသောသုံးအရောင် SMD Downlight
နောက်တစ်ခု: 70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့် Flat Fascia Plastic Cover လူမီနီယမ် SMD Downlight